"कालोबजारी गर्नेलाई पाता कस्छौं, सूचना दिनुहोस" - मन्त्री भट्ट | दर्पण दैनिक
"कालोबजारी गर्नेलाई पाता कस्छौं, सूचना दिनुहोस" - मन्त्री भट्ट
प्रकाशित मिति: २०७६ चैत्र ९ गते ०५:२७
काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले सरकारले खाद्यान्नलगायतका अत्यावाश्यक वस्तुको अभाव हुन नदिनेगरी बन्दोवस्त गरेको स्पष्ट पारेका छन् ।
क्लबका सभापति ऋषि धमलाको सभापतित्वमा आयोजित साक्षात्कारमा बोल्दै मन्त्री भट्टले बजारमा खाद्यान्न लगायत अत्यावश्यक वस्तुको अभाव हुन्छ भन्ने मनोवृत्तिले उपभोक्ताले संचितीकरण गर्न थालेकोले केही समस्या उत्पन्न भएको पनि टिप्पणी गरे । उनले भने,‘कतिले चारदेखि ६ वटासम्म सिलिण्डर राख्ने गरेका छन्, कतिले त दुई चार बोरा चामल राख्ने गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा कतिपय व्यापारीले पनि मौकाको फाईदा उठाउनलाई कालोबजारी गर्न सक्छन् । हामीले मन्त्रालयको टिमलाई पूरै परिचालन गरेका छौं । कोहीपनि कर्मचारी विदामा नबसी फिल्डमा खटिनुभएको छ ।’
उनले सुरक्षाकर्मीहरु र अस्पतालमा खटिने कर्मचारीहरुको लागि अत्यावश्यक वस्तुको व्यवस्थापन गरिने पनि विश्वास दिलाए । उनले भने,‘हामीले अत्यावश्यक वस्तुको व्यवस्थापन गरेका छौं ।’ उनले हरेक नागरिकले अनुगमन गर्नुपर्ने पनि सुझाव दिए । उनले भने,‘उपभोक्ता ऐन आईसकेको छ । अब सबै नागरिकले कडाईका साथ अनुगमन गर्नुपर्छ ।’
उनले अहिलेको लडाई सबैले एकजुट भएर लड्नुपर्ने बताए । उनले भने,‘सरकारले एकपछि अर्को तयारी गरेको छ । विभिन्न मुलुकले कसरी काम गरिरहेका छन् भन्ने कुरापनि हामीले हेरेका छौं । विशेषगरि चीनमा कोरोनाविरुद्ध कसरी लडियो भन्ने कुरापनि हामीले हेरेका छौं । भारतपनि कसरी लडिरहेको छ भन्नेपनि हेरिरहेका छौं । युरोप किन लड्न सकेन ? यी सबै कुरा हेरेर हामीले एकपछि अर्को तयारी र कदम चालेका छौं ।’
‘भोलि केहीगरि कोरोना भित्रिएर बजारमा खाद्यान्न अभाव भयो भने सरकारले केह गर्न सक्दैन् होला भनेर आम नागरिक ढुक्क छैनन् । तर, त्यस्तो अवस्था आयो भने सरकारले घरघरमै खाद्यान्न पुर्याउनेगरि गृहकार्य गरेको छ ।–उनले थपे । ‘मन्त्रालयका कर्मचारी कोही पनि विदा बस्न पाउँदैनन् । देशभरिकै आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउनको लागि स्वास्थ्य, गृह, उपभोक्ता संरक्षण हित, आपूर्ति मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय लगायतसँगको समन्वयमा काम भैरहेको छ । कहाँ कति चाहिन्छ ? भन्ने कुरा पनि आँकलन गरेका छौं । यदि अभावको अवस्था आयो घरदैलोमा ढुवानी गर्ने व्यवस्था गरेका छौं । ’